I-China Z-LION 16KP inhlaka yedayimane yokupholisha abakhiqizi nabaphakeli |Idayimane ye-ZL
Ububanzi bale bond ye-resinidayimane polishing puckingu-3" (76mm).
Ugqinsi lokupholisha inhlaka yale puck yedayimane ingu-10.5mm.
Itholakala ngegrits 50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000# futhi iklanyelwe ukusetshenziswa ngokulandelana ukuze uthole izinga le-sheen olidingayo.
Ifomula eyingqayizivele ifanele kokubili ukupholisha phansi kukakhonkolo kanye nemabula.
Iphethini ekhethekile yendawo ye-turbo enamashaneli abanzi odaka olusheshayo nemfucumfucu ehamba.
I-resin puck ngayinye inokusekelwa kwe-velcro kanye nesendlalelo se-cushion enethonya lerabha esivumela umthelela ongalingani phezu kwaphansi.I-velcro enekhodi yombala emuva ukuze kubonakale kalula amagrits.
Lawo ma-pucks okupholisha inhlaka asetshenziswa uma amaphasi okugaya eseqediwe ukukhiqiza iphansi elibushelelezi eline-DOI enhle kakhulu kanye nesicwebezelisi.
Lawo ma-resin polishing pucks aklanyelwe ukusetshenziswa emanzi, futhi angaqhutshwa ngaphansi kwezigayi zanoma yisiphi isigaba sesisindo.
Ibhondi ye-resin ye-Z-LION 16KPdiamond floor polishing padsiyithuluzi lokupholisha elisebenza ngezindlela eziningi elisebenza kahle kukho kokubili ukhonkolo nephansi lemabula.Izici ezikhethekile zale puck yokupholisha i-resin yilezi ezilandelayo:
Izinhlayiya zedayimane ze-Premium zokupholisha okungaguquguquki ngaphandle kwama-smear marks.
I-matrix yokuphathelene ye-resin ephakeme kanye nesakhiwo sebhondi esihlala isikhathi eside ukuze kwakheke phansi okucwebezelayo okuphezulu.
Ububanzi obujwayelekile obungu-76mm ukuze kulingane uhla oluphelele lwemishini embonini.
10.5mm ukujiya kwe-resin yokupholisha impilo ende.
Isendlalelo se-cushion enethonya lerabha sokupholisha okungaguquki kanye nokuguga.
Iglue yekhwalithi ephezulu ukunciphisa amathuba okuxebuka kwe-velcro.
Isetshenziswa kuma-grinder aphansi ukupholisha ukhonkolo noma imabula phansi.Isetshenziswa lapho ukudlula kokugaya sekuqediwe ukususa imihuzuko futhi kukhiqizwe iphansi elibushelelezi nge-DOI enhle kakhulu kanye nesicwebezelisi.Idizayinelwe ukusetshenziswa imanzi.Ingaqhutshwa ngaphansi kwama-grinders anoma yisiphi isigaba sesisindo.
Okwedlule: I-Z-LION imicibisholo ephindwe kabili ye-trapezoid izicathulo zokugaya ukhonkolo
Ibhondi yensimbi ekabili izicathulo zokugaya idayimane...
Z-LION ingxenye yemicibisholo ephindwe kabili ye-trapezoid ikhonkolo ...
Amaphedi okupholisha inhlaka emanzi yokupholisha...
Iphedi lokupholisha le-resin yedayimane elimanzi likakhonkolo...